Darawal Malaayiin Doollar La Baxsaday - News - Wararka - Somali Forum - Somalia Online
Darawal Malaayiin Doollar La Baxsaday
By Deeq A., Thursday at 06:09 AM in News - Wararka
(SLT-Paris)-Labo nin oo ka shaqeeya in ay lacagaha kala gudbiyaan oo dalka Faransiiska kusugan ayaa amakaagay ka dib markii ay waayeen baskii ay wateen oo lacag ka buuxday iyo qofkii saddexaad ee la shaqaynayay.
Gaarigii ayaa laga helay meel aan sidaa uga fogayn meeshii ay ku sugnaayeen, balse waxaa la waayay darawalkii 28 jirka ahaa iyo lacagtii saarnayd oo kor u dhaafaysay saddex milyan oo doolarka Maraykanka ah.
Gurigii uu aaday ayaa lagu bartilmaameedsaday waxaana la helay qaar ka mid ah lacagtii.
Qofka laga shakisan yahay ayaa magaciisa lagu sheegay Adrien Derbez waxaana lagu xiray caasimadda fiidnimadii Talaadada.
Wakaaladda wararka ee AFP ayaa ku warrantay in wali la la’yahay lacag lagu qiyaasay in kabadan 1.5 milyan oo doolaar.
Lacagtan ayaa lala baxsaday subaxnimadii hore ee Isniinta 06:00 subaxnimo, saddexdan shaqaale ayaana lacagta gaynayay goob kale sidii ay shaqadoodu ahayd iyaga oo saaran bas ay shirkad dhanka ammaanka ka shaqaysa leedahay, lacagta waxaa iska lahaa waax ka tirsan xawaaladda Western Union oo ku taalla duleedka magaalada Paris.
Labo ka mid ah shaqaalaha ayaa bixiyay lacag laga dalbaday, darawalkii ayaana laga codsaday in uu lacagta kale sii ilaaliyo.
Balse markii ay soo laabteen ayay waayeen darawalkii iyo gaarigii ay lacagtu ku jirtay, sida ay ilo ka tirsan booliisku u sheegeen wakalaadda wararka ee AFP.
Meel aan sidaas ooga sii fogaynna baskii ay lacagtu saarnayd ayaa la arkay isaga oo albaabadu u balaqan yihiin oo maran.
Talaadadii ayay booliisku dalbadeen dadkii goobjoogga ahaa waxayna baahiyeen sawirka Derbez.
Booliiska oo la soo tilmaamay ayaana galay guri ku yaalla Amiens fiidnimadii, sida ay ku warrantay warbaahinta Faransiiska.
Waxaa la sheegay in booliisku ay qabteen Derbez oo isku dayaya in uu daaqadda ka baxo isaga oo boorsooyin dhawr ah wata.